Marka wajiga wejiga uu ka fiican yahay emailka
Posted by Tranquillus | Jan 1, 2019 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Theemail inta badan waxay noo ogolaataa inaan wax badan la xidhiidhno. Natiijo ahaan, internetka ayaa ka buuxa talooyin si wanaagsan loo qoro, liistada sababaha looga hor tago in emayl loo diro waqtiyo go'an, ama talo ku saabsan sida ugu dhaqsaha badan aan wax uga qaban karno, iwm. Si kastaba ha noqotee, sida ugufiican ee waqtiga lagu badbaadiyo lagana fogaado jahwareerka wuxuu noqon karaa in la xasuusto in wada hadalada qaarkood aysan ku dhici karin emaylka, halkan waxaa ku yaal tusaalooyin.
Markaad gudbiso war xun
Faafinta warar xun maahan wax fudud, gaar ahaan marka ay tahay inaad u gudbiso maamulahaaga ama maamulahaaga. Laakiin, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu yareyn karo dhibaatada. Marka hore, dib ha u dhigin oo waqti ha lumin; waxaad u baahan tahay inaad masuuliyad iska saarto oo aad si buuxda u sharaxdo xaaladda. Ku siinta war xun e-mayl ma ahan fikrad fiican, maadaama loo fahmi karo inay tahay isku day looga fogaanayo wadahadalka. Waxaad u soo gudbin kartaa sawirka qof cabsi leh, xishooday, ama xitaa aan qaan gaarin oo noqon kara qof firfircoon. Marka markaad hayso war xun oo aad la wadaagto, ku samee shaqsi ahaan mar kasta oo ay suurta gal tahay.
Marka aadan hubin waxa aad ula jeeddo
Guud ahaan, way fiicantahay in lagu dadaalo inaad noqotid qof fir-fircoon halkii aad ka falcelin lahayd. Nasiib darrose, emaylku si fiican buu isu amaahiyaa noocan ah falcelin. Waxaan dareemeynaa cadaadis in aan faaruqino sanduuqyadeena, emayllada intooda badan waxay u baahan yihiin jawaab celin. Marka mararka qaarkood xitaa markaan aanaan hubin sida aan u jecelahay inaan ka jawaabno, faraha ayaa bilaabaya qoritaanka si kasta. Taabadalkeed, naso markaad u baahato inaad mid qaadato. Raadi macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mawduuca, halkii aad ka jawaabi lahayd ka hor intaadan run ahaantii ogaan waxa aad ka fikirayso iyo waxaad jeclaan lahayd inaad tiraahdo.
READ Codsiga mushahar kordhinta ee email ahaan
Haddii aad dareentid inaad cadaadis ku samaysay codka
Inbadan oo naga mid ah ayaa adeegsada emaylka si ay uga fogaadaan wadahadal adag. Fikradda ayaa ah in warbaahintani ay na siineyso awood aan ku qori karno emayl u gaari doona qofka kale sida aan rajeyneyno. Laakiin, badanaa, tani ma aha waxa dhaca. Waxa ugu horreeya ee dhibaataysan waa waxtarkayaga; farsamaynta emayl si fiican loo farsameeyay ayaa qaadata muddo aad u dheer. Marka, in marar badan qofka kale uusan u aqriyi doonin e-maylkeena qaabkii aan filaynay si kastaba ha ahaatee. Marka, haddii aad dareento inuu ku silcayo dhawaaqa marka aad email qoraneyso, is weydii haddii kiiskan sidoo kale uusan macno badan yeelan karin in wada hadalkan fool ka fool loola macaamilo.
Haddii ay u dhaxeyso 21h iyo 6h oo aad daalan tahay
Way ka sii dhib badan tahay inaad si cad u fikirto markii aad daalan tahay, shucuurtuna way sii adkaan kartaa marka aad ku jirto xaaladdan sidoo kale. Marka, haddii aad fadhido guriga, oo aad ka baxsan tahay saacadaha shaqada, tixgeli inaad garaacdo qoraalka qabyada ah halkii aad ka dhajin lahayd badhanka dirista. Taabadalkeed, qor qoraal qabyo ah, haddii ay kaa caawinayso inaad iska ilowdo dhibaatada, oo akhri subaxdii ka hor intaadan dhammaystirin, markaad leedahay aragti cusub.
Markaad weydiisato kordhin
Wadahadalka qaarkood waxaa loola jeedaa in si fool ka fool ah loo qabto, marka la doonayo in laga wada hadlo kor u qaadista, tusaale ahaan. Tani ma aha nooca codsiga aad rabto inaad ku sameyso emaylka, badanaa maxaa yeelay waxaad dooneysaa inay noqoto mid cad oo waa arrin aad si dhab ah u qaadatay. Intaas waxaa sii dheer, waxaad rabtaa inaad diyaar u ahaato inaad ka jawaabto su'aalaha la xiriira codsigaaga. Diritaanka emaylka ayaa diri kara fariin qaldan. Qaadashada waqti aad kulakulanto maareeyahaaga shaqsi ahaan duruufahan awgood waxay kuu keeneysaa natiijooyin dheeri ah.
READ Si fiican u qorista, xirfad muhiim ah!
Marka wajiga wejiga uu ka fiican yahay emailka May 10th, 2020Tranquillus
horeHagaajinta xirfadahaaga qorista
socdaMuhiimadda mawduuca mawduuca ee emayl xirfadeed
Qaate kasta wuxuu leeyahay qaacido edeb leh oo habboon!
Hagaaji qaabka qoraalkaaga: isku xirayaasha macquul ah
Isticmaal email email